AKHRISO:- AMISOM Oo Taliyayaasheeda ku amartay fulinta qorshaha ka bixidda Soomaaliya – Kismaayo24 News Agency
AKHRISO:- AMISOM Oo Taliyayaasheeda ku amartay fulinta qorshaha ka bixidda Soomaaliya
by Ahmed sudani 15th April 2018 041
Ku xigeenka howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM Simon Mulongo, ayaa amar ku siiyay taliyayaasha kala duwan ee Ciidanka AMISOM in ay fuliyaan qorshaha AMISOM ay kaga baxeyso Soomaaliya si loo fuliyo xeerkii Golaha amaanka ee Qaramada Midoobey.
Mr. Mulongo,waxaa uu ka hadlayay kulan ay isugu yimaadeen taliye qeeybeedyada AMISOM,kaas oo looga hadlayay xaaladda Soomaaliya,sida AMISOM u soo gaba gabeyn karto howlgalka iyo dhaqan gelinta Qaraarkii Golaha amaanka ee farayay AMISOM in amniga Dalka ay ku wareejiso Ciidanka Soomaaliya.
Waxaa uu sheegay in awood ku wareejinta Ciidanka Soomaaliya ay suuragal tahay marka AMISOM ay laba jibaarto howlgalkeeda ka dhanka ah Al-shabaab,kana guuleysato markaas oo AMISOM uu sheegay in ay u fududdahay wareejinta Amniga Soomaaliya.
Isaga oo ka hadlayay shaqada AMISOM ayuu sheegay in shaqada ugu weyn ee AMISOM ay tahay hadda fulinta qorshaas iyo xaqiijinta doorashada qof iyo cod ee Sanadka 2020, la filayo in ay ka dhacdo Soomaaliya.
Haji Ssebirumbi, oo ah sarkaalka dhinaca siyaasadda AMISOM ayaa sheegay in qorsha wareejinta amniga Soomaaliya ay hoggaamineyso Dowladda Federaalka ah AMISOM-na ay qeyb ka tahay fulinta howshaas.
Mr. Ssebirumb,ayaa intaas ku daray in 1,000 Askari oo AMISOM ah ay ka bixi doonaan Soomaaliya Bisha October ee 2018,halka 1,000 kalena ay horay u baxeen dhamaadka Sanadkii la soo dhaafay.
AKHRISO:- Dawladda Qatar iyo Dawladdo kale oo diiday ka qeyb galka Shirka Madaxda carabta.
Shirkii Madaxda Dalalka Carabta Oo Ka Furmay Dalka Sacuudiga
Duqeyn lala beegsaday xarun ay ku shirayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab
admin 29th November 2019
XASAASI: Ganacsatadda Galmudug Oo Si Kulul Uga Hadley Hadal Ay Puntland Dhawaan Soo Saartey, Iyagoona………………..
Tifaftiraha K24 4th September 2016
Daawo: Xilka wasiiru dowladaha wasaaradda amniga oo maanta loo dhaariyay Cadirashiid Cali Geelle
Tifaftiraha K24 17th June 2017